Cele Gabar - Page4of 333 - The World of Celebrity
မကြာခင်မှာ သမီးလေးကို တွေ့ရတော့မှာမို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဘေဘီမောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ် မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီကတော့ လက်ရှိမှာ သမီးဦးလေးကိုကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီး မကြာခင်အချိန်မျာမွေးဖွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဘေဘီမောင်ကတော့ သမီးလေးကို မွေးဖွားခါနီးသမီးလေးအပေါ်ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို “ကျွန်မတို့မိသားစုရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမီးရတနာလေး၈လပိုင်းဆိုရောက်လာတော့မယ်။ဖေဖေဂန်းကြီးအရမ်းပျော် မေကြီးကလည်းပီတိဖြစ် ဒီမေမေဘေဘီကတော့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမဆုံး အစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့လောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးဖန်တီးပေးတဲ့လောကကြီးရေ”ဆိုပြီး သမီးလေးကိုတွေ့ရတော့မှာမို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားကာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားမျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ပထမဆုံးရင်သွေးလေးဆိုတော့ မိဘတွေကစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေတာကတော့ သဘာဝပါပဲနော်။ Source – Thandar Zaw Chilli – CeleGabar -Zawgyi Font ဖြင့် ဖတ်ရန်- မၾကာခင္မွာ သမီးေလးကို ေတြ႕ရေတာ့မွာမို႔ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့တဲ့ ေဘဘီေမာင္ …
ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်တောင် အမှန်တကယ်ချစ်ကြိုက်နေကြပြီလားလို့တွေးမိတဲ့အထိ အနမ်းဇာတ်ဝင်ခန်းပီပြင်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦး
4 days ago	International Cele
ကိုရီးယားဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွေကတော့ သရုပ်ဆောင်တွေပီပြင်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒရမ်မာရိုက်ကူးရင်းချစ်ကြိုက်ကာ လက်ထပ်သွားတဲ့စုံတွဲတွေတောင်ရှိပါတယ်။ ဒီစုံတွဲကတော့ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတာကြောင့် ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်တောင်မှ ချစ်ကြိုက်နေကြပြီလားလို့ထင်ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးနဲ့မင်းသားဖြစ်တဲ့ Ji Chang Wook နဲ့ Kim Ji Wonတို့ ပါပဲ။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ “Loverstruck in the City” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ Ji Chang Wook ကတော့ ဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး Kim Ji Wonကတော့ အလွတ်တန်းဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရေးသမားတစ်ယောက်ပါ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့မြို့ကြီးမှာဒီလူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ရင်ခုန်စရာအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး လိုက်ဖက်ညီတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူကတော့ “သရုပ်ဆောင်အချိတ်အဆက်မိလှတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပထမတော့ အရမ်းရင်းနှီးပြီးမောင်နှမပုံစံနဲ့တူတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်က ချစ်သူတွေဖြစ်မှာကို စိတ်ပူခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ …
ပရိသတ်ကြီးရေ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်းတွေ ထွက်ရှိထားတဲ့ အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားခဲ့ပါသေးတယ်။ မောင်ချိုလေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေက သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်နားထားပြီး မကြာခင်အချိန်ကအနုပညာအလုပ်တွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်တော့မယ့်အကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ မောင်ချိုလေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း မောင်ချိုရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မောင်ချိုက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ Team 143 နဲ့အတူ MTV လေး တစ်ခုကိုရိုက်ကူးနေကြောင်း ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ MTV အသစ်လေးကတော့ JustaMoment သီချင်းအတွက် MTV လေးပါတဲ့။ Source – ChanMyae …
မင်းသမီး Kim Sae Ron ဟာအရက်သောက်ပြီးကားတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားဝင်တောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ခဲ့
မနေ့ကမနက်ကတော့ မင်းသမီး Kim Sae Ron ဟာ အရက်သောက်ပြီးကားမောင်းခဲ့တာကြောင့် လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံကိုတိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ အရက်သောက်ထားခြင်းရှိမရှိကိုသွေးစစ်ဆေးချက်လုပ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မင်းသမီးရဲ့အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ Gold Medalist ကတော့ အခုအဖြစ်အပျက်အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။Kim Sae Ron ကတော့ သွေးအဖြေစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် အိမ်သို့ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သွေးစစ်ဆေးမှုရလဒ်ထွက်လာပြီးနောက်မှာလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာ ပါဝင်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အေဂျင်စီကတော့ အခုလိုအဖြစ်အပျက်အတွက်တောင်းပန်ထားပြီး မင်းသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Kim Sae Ron ကတော့ အခုလုပ်ရပ်အတွက် လေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတာဖြစ်ပြီး အခုအဖြစ်အပျက်ကြောင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသူတွေကိုလည်း တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မင်းသမီးကတော့ အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရိုက်ကူးနေတဲ့ “Trolley” ဆိုတဲ့ဒရမ်မာမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် မင္းသမီး …
ပရိသတ်ကြီးရေ လေးဖြူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်ကြီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ IC အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီအယ်ဘမ်တွေထွက်ရှိထားတဲ့ အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိထားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ မေလ (၁၉)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် လေးဖြူရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မေလ (၁၉)ရက်နေ့လေးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် လေးဖြူက အသက်(၅၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။ Happy Birthday ပါ ကိုလေးရေ…. ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒများအားလုံး ပြည့်စုံပါစေလို့ CeleGabar ကနေမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ကိုလေးဖြူရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Source – Chit San Maung Chilli …
ညီမဖြစ်သူ သဉ္ဇာရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ပရိသတ်ကြီရေ ဝါဆိုမိုးဦးနဲ့ သဉ္ဇာကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုကလည်း အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေခဲ့ပြီး မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကို ရပ်တည်နေတဲ့သူပါ။ သဉ္ဇာကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို စတင်လုပ်ကိုင်တာ အချိန်မကြာသေးပေမဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကိုပါရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ(၁၉)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သဉ္ဇာရဲ့ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုကတော့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ညီမလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် “Happy birthday my lovely sis Thinzar. လိုအင်ဆန္ဒတွေအမြဲပြည့်ပါစေ။ ငပိန်းမလေး” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံလေးကနေစလို့ လက်ရှိအချိန်ထိ နှစ်ယောက်တူတူရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ …
ရိုက်ကွင်းကိုမုန့်ကားပို့ခဲ့တာကြောင့် Song Hye Kyo နဲ့မင်းသား Jung Kyung Ho တို့ကြားကရင်းနှီးတဲ့ခင်မင်မှုကိုသိသာစေခဲ့
5 days ago	International Cele
မင်းသား Jung Kyung Ho ကတော့ အစားအစာတွေပါဝင်တဲ့ထရပ်ကားကို Song Hye Kyo ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးနေရာကို ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ မေလ(၁၆)ရက်နေ့မှာတော့ Song Hye Kyo ဟာ မင်းသား Jung Kyung Ho ပေးပို့ခဲ့တဲ့မုန့်ကားကို အင်စတာဂရမ်မှာတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမုန့်ကားမှာတော့ သောက်စရာအအေးမျိုးစုံပါဝင်ပြီး “ဘယ်အချိန်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ်မသိနိုင်တာကြောင့် အရသာရှိတဲ့မုန့်တွေနဲ့ အအေးတွေကို သုံးဆောင်ပါ။ Moon Dong Eunနဲ့ The Glory ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့သရုပ်ဆောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အားပေးနေပါတယ်။ မှ Kyung Ho” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ Song Hye Kyo ကတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Kyung Ho ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့Storyမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ …
” ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမခေတ်စားခင်ကတစ်နှစ်ကို ဝတ်စုံposterအခု၅၀-၁၀၀လောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရကြောင်း သတိတရပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ခင်ပွန်းဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက်သားနဲ့သမီးကို ဖခင်နေရာရောမိခင်နေရာအတွက်ပါ စောင့်ရှောက်ပြုစုနေခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။သားနဲ့သမီးကို အချိန်ပေးကာ ကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်းနေတဲ့ အပြင် စီးပွားရေးကိုလည်း ဦးဆောင်ကာရှာဖွေလျက်ရှိတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့”မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေမရိုက်ဖြစ်တာကြာပေါ့ခုပြန်ရိုက်ရတော့အရင်ချိန်လေးသတိရလိုက်တာအရင်social mediaမရှိခင်ကဆို ချုပ်ဆိုင်တွေအတွက်ဝတ်စုံposterတွေအရမ်းရိုက်ရတာ posterတခုကိုဝတ်စုံ၁၅စုံနဲ့တနှစ်ကိုposterအခု၅၀-၁၀၀လောက်ရိုက်ရတာပေါ့အဲ့အချိန်လေးတောင်ပြန်လွမ်းသွားတယ်”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပြောပြလာခဲ့တာပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်အမေဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်ကို ခန္ဓာကိုယ်သေးသွယ်လှပမှု​ကတော့ အပျို​ရှူံးရလောက်တဲ့ထိပါပဲနော်။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပကာ အမြဲနုပျိုနေတဲ့ နန်းမြတ်ကို သဘောကျအားပေးကြတယ်ဆိုရင်မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Koe-CeleGabar Soure : Nann Myat Phyo Thin ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမေခတ္စားခင္ကတစ္ႏွစ္ကို ဝတ္စုံposterအခု၅၀-၁၀၀ေလာက္႐ိုက္ကူးခဲ့ရေၾကာင္း သတိတရျပန္လည္ေျပာျပလာတဲ့ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္း” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းကေတာ့ခင္ပြန္းဆုံးပါးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္သားနဲ႔သမီးကို ဖခင္ေနရာေရာမိခင္ေနရာအတြက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေနခဲ့တဲ့မင္းသမီးတစ္လက္ပါ။သားနဲ႔သမီးကို အခ်ိန္ေပးကာ ကိုယ္တိုင္ထိန္းေက်ာင္းေနတဲ့ အျပင္ စီးပြားေရးကိုလည္း ဦးေဆာင္ကာရွာေဖြလ်က္ရွိတာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့”ျမန္မာဝတ္စုံေလးေတြမ႐ိုက္ျဖစ္တာၾကာေပါ့ခုျပန္႐ိုက္ရေတာ့အရင္ခ်ိန္ေလးသတိရလိုက္တာအရင္social mediaမရွိခင္ကဆို ခ်ဳပ္ဆိုင္ေတြအတြက္ဝတ္စုံposterေတြအရမ္း႐ိုက္ရတာ posterတခုကိုဝတ္စုံ၁၅စုံနဲ႔တႏွစ္ကိုposterအခု၅၀-၁၀၀ေလာက္႐ိုက္ရတာေပါ့အဲ့အခ်ိန္ေလးေတာင္ျပန္လြမ္းသြားတယ္”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေျပာျပလာခဲ့တာပါ။ ကေလးႏွစ္ေယာက္အေမျဖစ္ေပမယ့္ …
​” ​ဆံပင်စတိုင်အသစ်လေးကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်နဂိုရှိရင်းစွဲထက် ပိုမိုနုပျိုလှပလာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တဲ့ဝတ်မှုံရွှေရည်”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့အကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုပိုင်ရှင်မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ သူမရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုလက်ရာမြောက်ကာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်မင်းသမီးတစ်လက်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ။အမြဲရှင်းသန့်ကျော့ရှင်းကာ အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုအမြဲလှပနေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို ချစ်ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ရွှေကစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့”New Hair …. Who’s this? 💇🏻‍♀️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ဆံပင်စတိုင်အသစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့​တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ အမြဲနုပျိုလှပကာ ဆယ်ကျော်သက်လေးတစ်ယောက်အလားထင်မှတ်ရတဲ့ရွှေကစ်ကတော့ အခုဆံပင်စတိုင်အသစ်နဲ့လည်း ထူးထူးခြားခြားလေးလှပနေတာပါပဲနော်။ အမြဲကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေထိုင်တတ်တဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးလေးကတော့ ဆံပင်စတိုင်နဒ့လည်းလိုက်ဖက်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတာပါ။CeleGabarပရိသတ်တေွလည်း ရွှေကစ်ရဲ့ဆံပင်စတ်ုင်အသစ်လေးကသူမနဲ့လိုက်ဖက်ညီရဲ့လားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Koe- CeleGabar Source- WuttHmoneShweYi ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ​” ​ဆံပင္စတိုင္အသစ္ေလးကိုေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္နဂိုရွိရင္းစြဲထက္ ပိုမိုႏုပ်ိဳလွပလာတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကိုတင္လာခဲ့တဲ့ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ကေတာ့ အကယ္ဒမီဆုႏွစ္ဆုပိုင္ရွင္မင္းသမီးတစ္လက္ပါ။ သူမရဲ႕ဇာတ္ကားေတြဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုပိုလက္ရာေျမာက္ကာ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္မင္းသမီးတစ္လက္လို႔ေတာင္ဆိုရမွာပါ။အၿမဲရွင္းသန္႔ေက်ာ့ရွင္းကာ အ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္လိုအၿမဲလွပေနတဲ့ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ကို ခ်စ္ပရိသတ္ေတြကခ်စ္စႏိုးနဲ႔ေ႐ႊကစ္လို႔လည္းေခၚၾကပါေသးတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့”New Hair …. Who’s this? 💇🏻‍♀️”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူ …